Muscadel - Amagilebhisi - Iningizimu Afrika
I-Muscadel eNingizimu Afrika ibhekisela kuMuscat de Blanc kuya ku-Petite Grains ezihlukahlukene, okusho ukuthi uma kuhunyushwa kusho uMascat omhlophe onamajikijolo amancane.
Kubhekwa njengenye yezinhlobo zokudala zewayini eziseduze kakhulu. INingizimu Afrika iveza izinhlobo ezihlukahlukene ezimhlophe kanye nokuguqulwa kwemvelo, okufana nezinhlobo ezimhlophe ngaphandle kokuba kube namajikijolo abomvu. Ngokuyinhloko isetshenziselwa ukukhiqizwa kwewayini eliqinile.
Inkolelo evamile ukuthi amaRoma athatha lezi zihlobo zakudala zesiGreki eFrance, lapho yayitshalwe kabanzi eFrontignan. Ezihlukahlukene, ngenxa yalesi sizathu, waziwa nangokuthi uMuscat de Frontignan.
Ngaphandle kwe-Muscat de Blanc kuya ku-Petite Grains no-Muscat Frontignan, izinhlobo ezihlukahlukene ezimhlophe ziyaziwa njengeGelber Muskateller eJalimane naseMuscat Canelli eCalifornia. Izinhlobo ezibomvu ziyaziwa ngokuthi i-Brown Muscat e-Australia.
I-Muscadel yayiphakathi kwezinhlobo ezazisetshenziselwa ukukhiqiza iwayini lokuqala laseNingizimu Afrika, emuva ngo-1659, eminyakeni embalwa emva kokufika kukaJan van Riebeeck eKapa. I-Muscadel emhlophe nebomvu, kanye noPontac obomvu, umhlophe uFrontignac noSteen, nabo babalwa phakathi kwezinhlobonhlobo ezibeka iwayini elimnandi lewayini elimnandi ebalazweni elizungeze i-18th and 19th Century.
Iwayini laziwa edolobheni, eliyintandokazi ezinkantolo zasebukhosini zaseYurophu, ngezidumiso zalo ezihlabelelwa yizimbongi ezidumile nabalobi. Ngokwesibonelo, uNksz Jennings, uSense Austen, uSense and Sensibility, wakhuthaza "uConstantia" ngamandla akhe okuphulukisa ngenhliziyo edidekile, kanti uCharles Baudelaire enkondlweni yakhe ethi Les fleur du mal (Flowers of Evil) waqhathanisa nentshisekelo yothando lwakhe .
UNapoleon Bonaparte usolwa ngokucela ibhodlela ebhukwini lakhe lokufa. Le nkathi yaphela lapho i-Phylloxera, isitshalo esincelisayo esiphuza esibhubhisa iningi lemivini kuleli zwe, lashaya iNingizimu Afrika ngo-1886. Kusukela ngaleso sikhathi, imivini yahlanganiswa ezimpandeni ezingamelana nalezi zinambuzane, okwathi ngaleso sikhathi engenisiwe esuka eNyakatho Melika.
INingizimu Afrika yayijwayele ukuba yilawa mazwe ambalwa kuphela ukuya ekhulwini lama-20 leminyaka elikhiqiza obomvu ngaphezu kweMiscadel emhlophe. Isimo sesishintshile ngokuhamba kwesikhathi, okuholela ekutheni ama-muscadel abomvu asetshenziswa ngaphezu kokuhlukanisa kusukela ngaleso sikhathi.
Ngenkathi indawo engaphansi kokukhiqiza iye yehla kakhulu eminyakeni, izivini zingasatholakala ezingxenyeni eziningi zokukhiqiza iwayini zezwe. IRobertson Valley inezivini eziningi zaseMuscadel, okubalwa ngaphezu kwengxenye yendawo ngaphansi kokukhiqizwa. Izinhlobonhlobo ezibomvu zikhula emhlabathini owodwa, ojulile we-Klein Karoo, kanti izinhlobonhlobo ezimhlophe zenza ngcono emhlabathini owodwa. Zombili izinhlobo zithanda isimo sezulu esomile esifudumele.
Lezi zinhlobonhlobo akuzona ezinamandla njengoba umzala wakhe, uMuscat d 'Alexandrie (owaziwa nangokuthi uHanepoot eNingizimu Afrika). Ngomkhiqizo ophakathi kuka-15 t / ha kuya ku-20 t / ha, ukukhiqizwa kwawo okusemandleni nakho okuncane kakhulu.
Ivuthisa ekuqaleni konyaka, kusukela ngesonto lesithathu likaFebhuwari.
Izinhlobonhlobo zinamasheji amancane naphakathi, amajikijolo nxazonke. Izinhlobonhlobo ezimhlophe zinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka, kanti umbala wezinhlobonhlobo ezibomvu ububanzi kusuka emaceleni kuya obomvu obomvu, kuye ngokuthi kuhlanganiswe.
Amaqabunga azo zombili izinhlobo ziluhlaza okwesibhakabhaka, obunzima, obuningi futhi obomvu abathathu.
Izinhlobonhlobo zithinta ukulimala kwelanga futhi zizwela ugundane omhlophe, isikhuhlane esincane, i-anthracnose, i-botrytis nokubola okumuncu.
Ngokuyinhloko isetshenziselwa ukukhiqizwa kwewayini elibomvu nelomhlophe elidayiswe ngaphansi kwelebuli le-Muscadel. Izindleko ezincane zisetshenziselwa ukukhiqiza iwayini elimnandi lemvelo.
Iwayini linamandla okuguga kakhulu kuzo zonke izinhlobo. Labo abenzelwe ukuphuza kusenesikhathi bangase babe nama-flavour amaningi amaningi, kanti labo abavunyelwe ukuba bafike eminyakeni yobudala bacebile futhi beyinkimbinkimbi, nge-flavour izithelo ze-honey, i-caramel ne-toffee.Translated by Zodwa Makondo